I-Damos Cube - Indawo Yokuqasha Yeholide enokubukwa - I-Airbnb
I-Damos Cube - Indawo Yokuqasha Yeholide enokubukwa
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Tamas
U-Tamas Ungumbungazi ovelele
I-Dömös Cube itholakala emizuzwini engu-45 ukusuka e-Budapest, eduze ne-Visegrad, ngaphansi kwe-Pilisi Forest. Indlwana ehlukile inekhishi elinakho konke, indlu yokugezela, i-air conditioning (ifriji/i-heater), igumbi lokuphumula kanye nekamelo lokulala elilala abantu ababili. Ngaphezu kwalokho, igumbi lokuphumula linosofa ogoqwayo, ngakho indlu ilungele izivakashi ezingu-1-4.
Ukubukeka okuhle kwe-Danube Bend kanye ne-Visegrad Castle kungabonakala kusuka ku-terrace nengadi yendlu. Indlu nendawo epholile yehlathi yizindawo ezinhle zokuphumula, kodwa kunamathuba amaningi okuvakasha. Imizila yokuqwala izintaba edumile iqala kusuka ku-Dömös: Ungahlola i-Rám rock, ukhuphukele esihlalweni Sokuzivocavoca noma Imihume yase-Nagymaros.
Ingadi ifakwe i-hammock, i-shower kanye nama-sun lounger. Kukhona nebhodwe ne-grill uma ungathanda ukupheka ngaphandle.
Umgwaqo oyinhloko we-Dömös, onezindawo zokudlela, isitolo sokuthenga kanye ne-Dömös Camping yimizuzu engu-10 ukusuka endlini, lapho noma ubani angajabulela khona indawo yokubhukuda ngemali encane. I-Visegrád, i-Pilismarót ne-Esztergom nazo ziqhele ngemizuzu engu-10-20 ngemoto noma ngebhasi.
Frequent traveller, digital nomad, love for hike, good food, and coffee
UTamas Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: MA21006494
Hlola ezinye izinketho ezise- Dömös namaphethelo